Ukwakha ama-aliases ku-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Ukwakha ama-aliases ku-GNU / Linux
Kunendlela elula yokwenza ngezifiso nokwenza eminye imiyalo ibe lula esivame ukuyisebenzisa "ikhonsoli", Ngokusebenzisa i- alias.
Un alias njengoba igama lalo lisho, kuzosisiza ukuthi esikhundleni segama noma uchungechunge lwamagama sifake elifushane nelilula. Masithathe isibonelo esisebenzisekayo, ake sithi sifuna ukubona i- izingodo kusuka ohlelweni, usebenzisa uhlelo lokusebenza olubizwa nge- Umbala wombala elibhekele ukufaka umbala kumphumela kukhonsoli. Ulayini uzoba:
Kepha ngiyaqiniseka ukuthi kuzoba lula uma esikhundleni sokubhala konke lokho, sifaka ikhonsoli ngokwesibonelo, into elula njengale:
Yiqiniso? Kungakhululeka kakhulu futhi kube lula ukukhumbula. Bese, sikwenza kanjani?
Ukwakha i-alias kulula impela. I-syntax kungaba:
alias short_word = 'umyalo noma amagama ukufaka esikhundleni'
uma sithatha isibonelo esedlule kungaba:
Umyalo ufakwe kuzingcaphuno ezizodwa. Kepha umbuzo uwukuthi Sikubeka kuphi lokhu? Yebo, uma sifuna ukuthi kube ngesesikhashana nje, simane siyibhale kukhonsoli futhi sizohlala size siyivale.
Manje, uma siyifuna unomphela, sikufaka lokhu ngaphakathi kwefayela ~ / .bashrc okuku- / ekhaya, futhi uma kungenjalo, khona-ke siyayakha (njalo kunachashazi ngaphambili). Lapho sesingeze umugqa we alias Kuleli fayela, simane sifaka ikhonsoli:
Qaphela: Izolo ngenxa yezinkinga nge-ISP yethu asikwazanga ukushicilela noma yini ku- <° Linux, esixolisa ngayo
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ukwakha ama-aliases ku-GNU / Linux
Lolu hlobo lokuthunyelwe alulimazi ukuvuselela lawo mathuluzi esingajwayele ukuwasebenzisa nsuku zonke. Futhi, ayinasikhathi; eminyakeni emithathu ngemuva kokuyibhala futhi ihlala njengosuku lokuqala.
Ngeza lokho, okungenani ku-debian, kunconywa ukuthi usebenzise ifayili le-.bash_aliases ukufaka izibizo zakho esikhundleni sefayela olishoyo. Yena. .bashrc inakekela ukusesha kufayela le-alias engikushoyo.
Siyabonga ngokufundisa. Nginombuzo: uthini umyalo '. .bashrc '? futhi ikakhulukazi wenzani ichashazi (.) eliphambi kwefayela .bashrc?
Ngiyazi ukuthi sekwephuze kakhulu, kepha ichashazi eliphambi kwegama lefayela lidala ukuthi lifihlwe kumafolda, ngakho-ke lizoba lapho, kepha ngeke ukwazi ukulibona uze ukhombise amafayela afihliwe.
Angicabangi ukuthi kubhekisa endaweni yokufihla amafayela. Uma ubheka kahle, kukhona enye ehlukaniswe isikhala ngaphambili:
Ekuqaleni bengicabanga ukuthi ngandlela thile lizosebenzisa ifayili noma lilayishe kabusha imininingwane eliqukethe. Esikhundleni salokho bekufanele ngiqale kabusha ukuze izibizo ziqale ukusebenza, ngakho-ke umyalo awaziwa.
Ungaqhubeka kanjani nokusebenzisa umyalo yize kukhona ama-alias abhekisa kulo myalo? (Isibonelo: ungawusebenzisa kanjani umyalo we-rm uma lokhu kungumbono wokunanela?)
Ngibonga kakhulu ngalokhu. Halala!
Sawubona, ngiyabonga kakhulu ngesifundo, sangisiza kakhulu.
Ungaluthola kanjani uhlobo lweMicroprocessor kusuka kuTheminali
IFirefox 7 isilapha, nokusebenza kangcono kwememori